I-Man City ibhaxabula i-PSG e-Paris | Scrolla Izindaba
I-Man City ibhaxabula i-PSG e-Paris
I-Manchester City isuke negoli emuva ukuze ishaye abesilisa abayishumi be-PSG ngamagoli amabili kwelilodwa yaphinde yanqoba emdlalweni womlenze wokuqala we-Champions League bedlala ne-PSG e-Parc des Princes Stadium e-Paris.
I-PSG kufanele inqobe ngamagoli amabili emlenzeni wesibili e-Manchester ezinsukwini eziyisithupha e-Etihad Stadium.
UMarquinos uvule amagoli ngekhanda ngebhola elivela ekhoneni lika-Angel Di Maria.
I-PSG ithokozele ubuningi bokubamba ibhola esiwombeni sokuqala ngoNeymar noMbappe besabisa njalo ezokuvikela ze-City.
Esiwombeni sesibili, i-Manchester City ifake ingcindezi ku-PSG futhi bavuzwa ngokufanelekile ngoKevin De Bruyne othole igoli lokulinganisa.
Ngemuva kwemizuzu emibili, i-City yathola igoli lokuhamba phambili nge-free-kick kaRiyad Mahrez ngemuva kokuthi uPhil Foden edlaliswe kabi emaphethelweni ebhokisi.
I-City isebenzise ithuba layo lesibalo kulandela ikhadi elibomvu elitholwe u-Idrissi Gueye ngokudlalisa kabi u-Ilkay Gundogan.
Umqeqeshi uPep Guardiola uthe iqembu lakhe belingenalo ulaka ngokwanele esiwombeni sokuqala.
“Isiwombe sokuqala besingesihle kangako kodwa esiwombeni sesibili besisebenza kahle kakhulu,” kusho uPep kwi-BT Sport.
“Sekuseduze phambili kodwa kusasele imizuzu engama-90 ukuthi siye emdlalweni wamanqamu.”
Umthombo wesithombe: @Riyadmahrez